Osoo Liiftiin hin jiru ta’ee magaaloonni keenya boca akkamii qabaatu? - BBC News Afaan Oromoo
Osoo Liiftiin hin jiru ta’ee magaaloonni keenya boca akkamii qabaatu?
Kun odeessa wantoota addunyaa kana jijjiiran bifa addaan walitti fufiinsaan isiniif dhiyeessinu kutaa lammataati.
Namoonni baay'een 'Liiftii' akka geejjiba uummataatti hin yaadan. Haa ta'u malee, guyyaatti namoota miliyoona dhibbaatamaan lakkaa'aman bakkaa bakkatti geessaa oolu. Chaayinaa qofa keessatti waggaatti 'Liiftii haaraa 660,000tu gamoowwan irratti ijaarama.
Dubaayitti kan argamu gamoon dheertichi addunyaa kanaa, Barj Khalifaan lafa bal'ina iskuweer meetira 300,000 irra qubatee jira.
Chikaagootti kan argamu gamoon 'Sears Tower' jedhamu ammoo lafa iskuwer meetira 400,000 ol irra qubate.
Goodayyaa suuraa Gamoo dheerticha addunyaa Barj Khalifaa, Magaalaa Dubaay
Gamoowwan kanneen bakka xixiqqoo 50 hanga 60tti osoo gargar basanii, tokkoo tokkoo isaaniif ammoo lafa dhaabbii konkolaataa fi karaa daandiin wal isaan qunnamsiisu osoo ijaaraniif, walumaa galatti lafa hamma magaalaa tokkoo gahu barbaachisa.
Namoonni hedduun gamoo guddaa tokko irratti, bakka tokkotti akka dalagan kan dandeessise 'Liiftii' dha.
Liiftiin erga kalaqamee tureera. Namicha Arkimeedes jedhamutu jalqaba Liiftii kalaqe jedhamee yaadama.
Yeroo duraaf bara 1743, Masaraa Varseeyls keessatti mootichi Luwiis 15ffaa dhoksaan sanyoo isaa biraa dhaqee deebi'uuf itti fayyadamees jedhama.
Goodayyaa suuraa Manni Ciisaa mootichaa fi kan sanyoo isaa sarara dhoksaan wal qunnamu qaba ture
Haangarii, Chaayinaa fi Masirii keessattis Liiftiin human bineeldotaatiin hojjetu tajaajila ni kenna ture.
Beektonni Warraaqsa Indastirii Biriteen keessatti qooda olaanaa qaban Matiiw Booltan fi Jeems Waat ammoo teeknooloojii Liiftii gulantaa tokko fulduratti tarkaanfachiisuun Liiftii human hurkaan hojjetu kalaqan.
Liiftiiwwan kalaqaman kunneen haalaan kan hojjetan haa ta'aniyyuu malee, olka'iinsa dheeraa ittiin imaluuf sodaatu ture. Sababni isaas rakkoon umamuu mala.
Hojii kalaqa liiftii keessatti gulantaan itti aanu, Liiftii nageenyi isaa amansiisaa ta'e kalaquu ture.
Kana ammoo kan milkeesse namicha Elisha Otis jedhamu. Bara 1853, agarsiisa addunyaa Niwyoork irratti Otis kalaqaa isaa agarsise.
Goodayyaa suuraa Agarsiisa Addunyaa Niwyoork bara 1853, Liiftii Elisha Otis wayita agarsiifamu
Liiftii isaatiin olka'iinsa dheera irra erga bahee booda, namni biroo haada liiftichaa dhagaraan akka kutu ajaje.
Agarsiisa kana namoonni akka nama murteen du'aa itti murtaa'ee fannifamuuf adeemuutti ture miiraan kan hordofan.
Liiftiin Otis haa kirkirtuyyuu malee hin kufne. Kanaan sodaa nageenya namoonni qaban hanga tokko hir'isuun danda'ameera.
Namoonni hedduun konkolaataa yookin baabura daqiiqaa muraasa obsaan dhaabbatanii eegan, sakandii 20'f Liiftii eeguuf obsa hin qaban.
Namoonni gariin hedduun ammoo Liiftiin deemuu ni sodaatu, haa ta'uyyuu malee nageenyi isaanii warra lafoo caalaa %10 eegamaa dha.
Kalaqaa fi guddina
Liiftii keessa seenanii hanga bakka inni gahu gahee balballi banamuutti eessa akka gahan beekuun rakkisaa ture.
Mallattoowwan fi agarsiiftuuwwan LED kana furuuf jecha kalaqaman.
Goodayyaa suuraa Mallattoowwan fi agarsiiftuu LED odeeffannoo imaltootaaf kennan
Yeroo gara yerootti teeknooloojiin Liiftii guddina agarsiisaa sadarkaa har'a irra jirurra gahee jira.
Wayita ammaa liiftiiwwan anniisaa qusatan bira darbamee kan anniisaa maddisiisan kalaquun danda'amee jira. Gariin ammoo hamma Kaarboonii gamoo tokko keessaa bahu hir'isuuf ni deeggaru.
Baay'ina namootaa Liiftiin geejjibsiisu, bal'ina lafaa gamoowwaan gurguddoo ijaaruun qusatuu fi walumaa galatti tajaajila Liiftiin kennaa jiru wayita ilaallu, osoo Liiftiin hin jiru ta'ee bocni magaalota keenyaa maal fakkaachu akka danda'u tilmaamuun ulfaataa miti.